निरन्तर झरीका कारण बुढीगंगा नदीमा पानीको बहाब बढ्यो, स्थानीयलाई सतर्क रहन आग्रह, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
निरन्तर झरीका कारण बुढीगंगा नदीमा पानीको बहाब बढ्यो, स्थानीयलाई सतर्क रहन आग्रह
काठमाडौं । २ दिनदेखि निरन्तर रुपमा झरी परेपछि बुढीगंगा नदीमा पानीको बहाब बढेको छ।
अघिल्लो वर्ष नै निरन्तर वर्षाका कारण त्रिवेणी नगरपालिका ९ पैमाबाट खसेको पहिरोले बुढीगंगा नदी थुनिएको हुँदा यो वर्ष पनि पानी बढेकोले स्थानीयलाई सतर्क रहन आग्रह गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुराका प्रहरी निरीक्षक लोकेन्द्र गुरुले बताए।
डिसी नेपालसंग कुरा गर्दै उनले भने, ‘सामाजिक सञ्जालमा पहिरोका कारण बस्ती नै जोखिममा भन्ने खबर आएपछि सिडिओ सापको टोलीसंग हामी अनुगमनमा गएका थियौं। सामाजिक सञ्जालमा देखिएको पहिरो आएको फोटो पुरानो नै रहेछ। पानीको बहाब भने बढेको छ। हामीले स्थानीयलाई सतर्क रहन आग्रह गरेका थियौं।’
प्रहरी निरीक्षक गुरुका उनका अनुसार स्थानीयहरुलाई त्यस्तो क्षति पुर्याउने केही छैन। बस्तीहरु नदिभन्दा निकै टाढा छन्। बरु नदि थुनिएको खण्डमा अछामको साँफेबगरमा क्षति हुन सक्छ। साँफेबगरमा पनि सतर्कका लागि आग्रह गरेको छ। ‘तर पानीको बहाब बढेपनि पानी निरन्तर बगिरहेको छ। तर्सित नै हुनुपर्ने अवस्था छैन। सतर्क रहन हामीले खबर गरिसकेका छौं।’ उनले भने।